China Kunze yekubikira gasi grill Kugadzira uye Fekitori | Chuliuxang
Iyo 3-inopisa Barbecue gasi grill ine yakapamhama grilling nzvimbo uye iri nyore matafura epadivi ekuisa matireyi ekushumira. Tumira spatula yako nembato pazvikorekedzo zvematurusi kuitira kuti zvese zvaunoda zviri pamunwe wako.Iyo simbi isina tsvina yekubikira girasi inochengetedza kupisa uye iri nyore kuchenesa kune yakanakisa kuravira chikafu. Uye kupera kwesimbi isina tsvina kunobatsira kudzivirira kuita ngura uye kuparuka nekufamba kwenguva.
Iyi itsva CLUX 3 inopisa gasi grill yakagadzirwa nesimbi isina tsvina uye ine yakazara yekubikira nzvimbo ye339 square inches. Yakashongedzerwa ne3 main burners, ichipa 30,000 BTU yemoto wekugocha simba, mudziyo uyu zvechokwadi unozadzisa zvaunotarisira bhachi. Iyo yunifomu yekudziya yekubikira sisitimu ine simbi isina simbi inopisa, angled flame regulators uye simbi isina simbi yekubikira grate inoshanda pamwe chete kugovera kupisa zvakaenzana pane iyo grill pamusoro uchidzikisa kupisa. Iyo igniter yemagetsi inogona kupisa pakarepo, uye iyo yepamusoro inopisa rack inopa nzvimbo yekupisa chingwa uye kuchengetedza chikafu chakabikwa. Iwo macasters anoita kuti zvive nyore kufamba, uye yakavakirwa-mukati thermometer inobvumira chaiyo tembiricha kugadzirisa.
Ptrotable barbecue gasi 3 burner grill
Panel Material Stainless simbi 410
Kukura Kwechigadzirwa 1215*535*1180mmH
Kurongedza saizi 685*655*550mm
Stainless STEEL BURNERS: Iyi propane gasi grill ine 3 Stainless Simbi zvinopisa, inogona kuburitsa 30,000 BTU-per-awa ine yakasanganiswa piezoelectric ignition system, kukurumidza kutanga nekusundidzira & kutendeuka kwekudzora knob.
ZVINOKOSHA: Iyo yese Stainless simbi yekudzora pani ine chromium plating control knob inoita iyi propane gasi grill iwedzere kudzidza uye kutetepa, mubato wesimbi isina simbi uye yakavakirwa-mukati simbi isina thermometer pavhavha yevhavha, maviri anorema ebasa mavhiri mavhiri ekuchengetedza nekufamba.
PORCELAIN-ENAMEL WIRE COOKING GRATES: Nzvimbo yekubikira yedu propane gasi grill ndeye 471.8 inosanganisira 339 square inches yekubika uye 132.8 square inches yekudziya.
AKASANGANA ZVIYERO: 46.46 L x 20.87 W x 41.14 H inch, uye 29.5 inch Kureba paunenge uchipeta ese ari maviri tafura yepadivi ye propane gasi grill
KUWANDA UYE ZVINOITA: Iyi propane gasi grill inorumbidza chero nzvimbo yekunze senge kuseri kwemba, gadheni, chivanze, terasi uye balcony yemhuri zhinji, imwe nzira mwaka wese yekubika kunze.
Zvakapfuura: commercial kitchen cooker
Zvinotevera: Simba indoor grill muchina
3 burner barbecue gasi grill
3 kupisa gasi grill
yakanakisa bbq grill
kunze kicheni gasi grill
481sq inch yekunze kicheni gasi grill
4 Burner BBQ gasi grill
Infrared 6 inopisa gasi barbecue grills
Commercial 8 burner gasi grill